Jamie Carragher oo saadaaliyey in xiddig aan ahayn Virgil van Dijk uu sanadkaan ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d’Or – Gool FM
Jamie Carragher oo saadaaliyey in xiddig aan ahayn Virgil van Dijk uu sanadkaan ku guuleysan doono abaal-marinta Ballon d’Or
(Liverpool) 10 Juunyo 2019. Halyeyga kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa rumeysan in daafaca Reds ee Virgil van Dijk uusan ku guuleysan doonin abaal-marinta Ballon d’Or sanadkan 2019, inkastoo uu kooxdiisa Liverpool kula guuleystay tartanka Champions League.
Carragher waxa uu taas bedelkeeda aaminsan yahay in kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi inuu abaal-marintan Ballon d’Or ku guuleysan doono markiisii lixaad, maadaama uu horyaalka La Ligaha Spain la qaaday Barca.
Waxa uu kooxdiisa Reds la hantay Koobka Horyaalka Yurub ee Champions League, Van Dijk ayaa sidoo kale masuul ka ahaa xilli ciyaareedka cajiibka ah ee uu qaatay in kooxdiisa Liverpool kaliya laga badiyo hal kulan horyaalka Premier League.
Waxa halyeygan Carragher ka dhaadhacsan in inta badan daafacyada aan muhiimad badan la siinin sida muhiimadda loo siiyo weeraryahannada, waxaana uu qabaa in Messi uu abaal-marintan Ballon d’Or kaga hormari doono difaacan reer Holland.
“Messi ayaa kaga horreeya dhanka sharadka lagu galayo laacicbka ku guuleysan doona abaal-marinta Ballon d’Or, balse waxaan arkaa in Messi uu ku guuleysan doono, maadaama ay dhif iyo nadir tahay inuu difaac dhexe abaal-marintan hanto.” Ayuu Sky Sports u sheegay Carragher.
“Difaaca kaliya ee ku guuleystay abaal-marintan waa Cannavaro, waxaana qabaa sababta kaliya ee uu u hantay inay ahayd inuu koobka Adduunka hantay sanadkii 2006.”
“Markii aan hadleynay horraantii xilli ciyaareedka waxaan ka hadleynay Pique iyo Ramos mana ahayn sababtu inay qaab ciyaareed ka fiican kan Van Dijk soo bandhigayeen, balse waxay billado kula guuleysteen kooxahooda iyo wadankooda.
“Waana sababta uu caawa uga xumaanayo inuusan ku guuleysanin Uefa Nations League, ma’ahan koob u dhigma Euro ama Koob Adduun laakiin waxay ahaan lahayd koob uu la qaaday Waddankiisa.” ayuu Carragher ku daray hadalkiisa.
Waxaana uu intaas sii raaciyey Carragher: “Waxaan qabaa inuu yahay xiddiga ugu fiican booskiisa, waana uu caddeeyey middaas, balse Ballon d’Or waxaan qabaa inuu ku guuleysan doono Messi.”
“Waxaan ku guuleystay wax walba si aan gacanta ugu dhigo Ballon d'Or” - Cristiano Ronaldo
SHAX laga sameeyey 11-kii ciyaaryahan ee ugu bandhigga fiicnaa tartanka UEFA Nations League oo la shaaciyey